EU: Mitemo mitsva yekupinda muHong Kong inotyisidzira mamiriro ayo epasi rese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Hong Kong Kupwanya Nhau » EU: Mitemo mitsva yekupinda muHong Kong inotyisidzira mamiriro ayo epasi rese
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hong Kong Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Utongi hutsva hwekuparadzanisa hunogona kuita kuti vazhinji mubhizimusi renyika dzese vabvunze kana vachida kuramba vakavharirwa muHong Kong.
Hong Kong toughens kupinda zvinodiwa kune vafambi vekunze.
Kuderedza kunosungirwa kwekuparadzanisa nguva hazvichakwanisika.
Hong Kong inoziva mushonga wakagadzirwa neRussia Sputnik V.
VaFrederic Gollob, Mutungamiri weEuropean Chamber of Commerce (ECC), vakati mitemo mitsva yakaoma yekupinda muHong Kong inogona kukanganisa chinzvimbo cheguta senzvimbo yepasi rose yebhizinesi neyemari.
"Tinotenda kuti guta rinofanira kuvhurwa kare, zvikasadaro hutongi hutsva hwekuparadzanisa vanhu hunogona kuita kuti vazhinji munharaunda yepasi rose vabvunze kana vachida kuramba vakavharirwa muHong Kong panguva iyo pasi rose pazororo," ECC musoro wakadaro.
Vhiki rino, iyo Hong Kong zviremera zvakare zvakasimbisa mitemo yekupinda munyika. Kunyanya, mukana wekudzora yekuparadzanisa nguva pamberi peyero yeserological yezvirwere.
Pakukwira nendege kuHong Kong, vafambi vanofanirwa kupa chitupa chekubatira, mhedzisiro yakaipa yeCOVID-19, yakatumirwa pasati pasvika maawa makumi manomwe nemaviri isati yasimuka, pamwe nekuchengeterwa kune imwe yehotera dzakakurudzirwa nehurumende uko nhanho dzekuisa vanhu vanobvumirwa.
Hurumende yeHong Kong yakaisawo zviri pamutemo Sputnik V inogadzirwa neRussia pachirongwa chemishonga yekudzivirira hutachiona inozivikanwa munzvimbo ino yeChina yekutonga.
Zvino, izvo zvinotarisirwa zvega zvevagari veguta vakasangana nemushonga wakagadzirwa neRussia, zvichaderedzwa kubva pamazuva makumi maviri kusvika kumazuva gumi nemana.